Naijiria Agbara Aka Ihe Olu - Igbo News | News in Igbo Language
Apr 29, 2020 - 10:35 Updated: Jan 19, 2021 - 10:36
Ndị na-ahazi ndị egwu bọọlụ Naijiria ga-enwe isi ọwụwa maka ebe mmiri siri wee baa n'opi ụgbọgụrụ ka goolu ndị Naịjirịa na-enye siri were gbadaa dịka egwuregwu ahụ na-aga n'ihu.
Na mbụ, ha jiri otu goolu merie Tanzania na asọmpi enyere goolu iteghete, were penariti merie Angola, ma jisi ike gbata onye laba onye laba dịka ha na Uganda gbara onwe ha otu ọkpụ otu ọkpụ, Guinea meriri ha na penariti; ebe ndị Angola mechiziri akwụkwọ.
Otu a ka o siri bịa n'isi njedebe maka otu egwuregwu bọọlụ bụ ndị nwere ọtụtụ ohere mana gbafusie ya, n'agbanyeghị ohere juru eju ha nwere, na akwụkwọ ọbara ọbara ndị Angola nwetara mere ha jiri dị mmadụ iri gbachaa nkeji iri atọ na anọ fọdụrụ, Ugo Ọlaedo emenwughị ihe ọ bụla.
Ebe Olatomi Olaniyan, Tijani na Charles Etim gbaliri bọọlụ ha elu oge ha nwetara ohere ịnye goolu, onye kacha nye goolu n'egwuregwu a bụ Osvaldo Capemba jiri isi nye goolu n'oghere mbụ Angola nwetara mana Wisdom Ubani sara goolu ahụ ka nkeji abụọ gasịrị.
Ka ha sachara goolu ahụ, ndị Naịjirịa ejighị ohere ha nwetara ọzọ mere ihe n'ime asọmpi ahụ, kama ha nọ na-agbafusị bọọlụ ha.
Kama nkea, Andre Sebastio Zito nyere goolu abụọ nke ndị Angola n'ohere ọma ọzọ ha nwere na nkeji nke atọ dịka ọkara nke abụọ bidochara, mana n'agbanyeghị lịkalịka niile ha gbara, Naijiria enweghị ike ime ihe ọ bụla na nkeji ndị ọzọ fọdụrụ.
N'ụbọchị ụka, Cameroon jiri ọkpụ ise merie mba Guinea na asọmpi ikpeazụ ha jiri bụrụ ọkaibe n'egwuregwu Afrịka maka ndị na-erubeghị afọ iri na asaa ka ha na mba Guinea gbachara onye ha onye laba onye laba.
Obodo anọ ndị a ga-anọchitezi anya Afrịka n'Iko FIFA na Brazil n'afọ a.
Otu Egwu Bọọlụ Ala Anyị Akwadowela
Chidi Igwe Mar 20, 2019 0
Ka ọga esi aga bụ asompi Uefa n’Ọgọst
Chidi Igwe Jul 11, 2020 0
Chidi Igwe Dec 11, 2019 0
Nigeria na Zambia gbaziri onye lawa onye lawa
Chidi Igwe Jan 27, 2013 0
Egwuregwu Ndị Uwe Ojii Nke Ahọ 2020 Abịala Na Njedobe n'Awka
Chidi Igwe Mar 11, 2020 0